गरिब परिवारमा जन्मिएका रोनाल्डो यसरी बने बिस्वकै धनी खेलाडी, यस्तो छ रोचक जानकारी । – List Khabar
Home / रोचक / गरिब परिवारमा जन्मिएका रोनाल्डो यसरी बने बिस्वकै धनी खेलाडी, यस्तो छ रोचक जानकारी ।
गरिब परिवारमा जन्मिएका रोनाल्डो यसरी बने बिस्वकै धनी खेलाडी, यस्तो छ रोचक जानकारी ।
admin July 3, 2021 रोचक Leaveacomment 49 Views
कीर्तिमानी फुटबल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोको जीवन कस्तो होला ? उनलाई जान्ने र बुझ्ने जो कोहीको लागि चासोको बिषय हुन सक्छ । गरिब परिवारमा जन्मिएका रोनाल्डोले कलिलो उमेरमा नै फुटबल खेल्न शुरू गरेका थिए । अन्तत उनी विश्वको सबैभन्दा प्रसिद्ध र महंगा खेलाडी बन्न सफल भए ।
सबैभन्दा बढी कमाउने खेलाडी : पोर्चुगलका स्टाइकर क्रिस्टियानो रोनोल्डो विश्वकै सबैभन्दा धेरै कमाउने खेलाडीहरुको सुचीमा पर्छन् । व्यवसायिक फुटबल खेल्न थालेपछि उनको जीवनमा क्रमिक सुधारका दिनहरु देखिन थाले । म्यानच्यास्टर युनाइटेड क्लबबाट सफलता पाएपछि उनले रियल मड्रिड क्लब जाने निधो गरे । विश्कै सबैभन्दा महँगो खेलाडी बन्दै उनी रियल मड्रिड गए । हाल उनी इटालियन क्लब युभेन्ट्समा आवद्ध रहेका छन् ।
जन्म र नाम : ५ फेब्रुअरी १९८५ मा पोर्चुगलमा जन्मिएका रोनाल्डोको बास्तविक नाम क्रिस्तिआनो रोनाल्दो दस सान्तोस हो । उनलाई सन २०१५ मा पोर्चुगलको फुटबल संघद्वारा पोर्चुगलको इतिहासमा हालसम्मको सबैभन्दा महान खेलाडी घोषणा गरिएको थियो। उनलाई विश्व फुटबलका महान खेलाडीहरू मध्येका एक मानिन्छ। बुबाले नै कान्छो छोराको नाम जुराएका थिए, रोनाल्डो । हलिउड नायक तथा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको नामबाट प्रभावित भएर उनले छोरोको नाम राखिदिएका थिए ।
बाल्यकालको पारिवारिक अवस्था : उनका पिता जोजे डिनिस अभेइरो नगरपालिकामा माली थिए । आमा भने खाना बनाउने काम गर्थिन् । उनका आमा क्यान्सरका रोगी हुन्, जो उपचारपछि सामान्य जीवनयापन गरिरहेकी छन् । खासमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो गरिब परिवारमा जन्मिएका हुन् । पोर्चुगलको पहाडी बस्तीमा उनको बाल्यकाल बित्यो । गरिब परिवारमा जन्मिएका रोनाल्डोले सानै उमेरमा पढाइ छाडे । एक दाजु र दुई दिदीका कान्छा भाइ रोनाल्डो सानो छँदा एकै कोठामा कोचिएर सुत्थे ।
फुटबल करियर : १४ वर्षको उमेरमा उनले आमाको कुरा मानेर सम्पूर्ण ध्यान फुटबलमा केन्दि्रत गरे । बुबा चाहन्थे, छोराले पढाइ सकेर रोनाल्ड रेगनजस्तै चर्चित बनोस् । तर, उनको विद्यालय यात्रा सुखद् रहेन । १४ वर्षको उमेरमा उनले आफ्ना शिक्षकमाथि कुर्सी प्रहार गरेका थिए र त्यही कारण विद्यालयबाट निष्कासित पनि भए ।
व्यवसायिक खेलाडीको रुपमा स्थापित भइसकेपछि उनले उक्त घटनाबारे बोल्दै भनेका थिए, ‘उहाँले मलाई अनादर गर्नुभयो ।’ हुन त उनी आठ वर्षको उमेरदेखि नै स्थानीय एमेच्योर क्लब एन्डोरिनाबाट फुटबल खेल्न थालेका थिए । ११ वर्षको उमेरमा उनी पोर्चुगलको चर्चित क्लब स्पोर्टिङ लिस्बनको फुटबल एकेडेमीमा प्रवेश गरिसकेका थिए ।
रोनाल्डो १६ वर्षको हुँदा उनको डि्रबलिङ -विपक्षीलाई छक्याएर बल अगाडि बढाउने) क्षमताबाट प्रभावित भएर स्पोर्टिङ सिपीका प्रशिक्षकले उनलाई युवा टोलीबाट मुख्य टोलीमा बढुवा गरेका थिए । स्पोर्टिङ र म्यानचेस्टर युनाइटेटबीच सन् २००३ अगस्टमा लिस्बनमा भएको खेलमा युनाइटेड ३-१ ले पराजित हुँदा युनाइटेडका खेलाडीहरु र प्रशिक्षक सर एलेक्स फर्गुसन रोनाल्डोको खेल कौशलबाट प्रभावित भए । यही खेलले रोनाल्डोलाई युनाइटेडमा स्थान्तरण गराउन मुख्य भूमिका खेल्यो । यसरी बढ्दै गएको उनको सफलताको ग्राफले महान फुटबलरको रुपमा स्थापित गरिदियो ।
सफल र धनि खेलाडी : रोनाल्डोले पोर्चुगल राष्ट्रिय फुटबल टोलीबाट सात प्रमुख प्रतियोगिताहरु खेल्दै देशलाई पहिलो प्रमुख अन्तराष्ट्रिय उपाधीको रूपमा युइएफए युरो २०१६ जिताएका थिए। उनी पोर्चुगलका राष्ट्रिय फुटबल टोलीको सबैभन्दा धेरै खेल खेल्ने र सर्बाधिक गोल गर्ने खेलाडी पनि हुन्। पोर्चुगलका राष्ट्रिय फुटबल टोली तथा युभेन्टसका अग्रपङ्क्तिका फुटबल खेलाडी उनले राष्ट्रिय टिम र बिभिन्न क्लबबाट गरि हालसम्म ७८३ गोल गरिसकेका छन् ।
स्पोस्टिङ्ग सेपेबाट क्लब खेल जीवन आरम्भ गरेका रोनाल्डोले आफ्नो उत्पादनशिल समय म्यानचेस्टर युनाइटेड र रियल म्याड्रिडमा दिएर लिग, च्याम्पियन्स लिग लगायत विभिन्न पुरस्कारहरू जितेका छन् भने धेरै किर्तिमानहरू पनि बनाएका छन्। त्यस्तै पुर्तुगालको राष्ट्रिय टोलीबाट युरोकप जितेका रोनाल्डोको नाममा पुर्तुगाल, युरोप, र विश्व फुटबलमा विभिन्न किर्तिमानहरू छन्। उनलाई सन २०१६ र २०१७ मा इएसपिएन र फोर्ब्सले क्रमश: सबैभन्दा चर्चित र सबैभन्दा धेरै कमाउने खेलाडी घोषणा गरेका थिए।
घर र अन्य सम्पत्तिहरु : ट्याग हिउर कारिया हिउर ०१ रोज गोल्डको घडी लगाउने उनको यो घडको मुल्य १०,१७३ अमेरिकी डलर पर्छ । उनको मड्रिडमा म्यानसन–७.२ मिलियन डलर, एल्डरली एड्ज म्यानसन, चेसरी, इंग्ल्याण्ड–६ मिलियन डलर, ट्रम्प टावरमा अपार्टमेन्ट, न्युर्योक–१८.५ मिलियन डलर, होलिडे म्यानसन, इजमार, टर्की–३.४४ मिलियन डलर, ग्रीसमा रहेको आयरल्याण्ड–३.४ मिलियन डलर बराबरको सम्पती छ ।
रोनाल्डोको हाल ५६ मिलियन डलर तलब रहेको छ । उनले युभेन्टसबाट बार्षिक ६४ मिलियन डलर कमाउने गर्छन् । उनको बार्षिक आम्दानी ८८ मिलियन डलर रहेको छ । उनको नेटवर्थ २८० मिलियन डलर रहेको छ । उनको आफ्नै २०.१८ मिलियन डलर पर्ने प्राइभेट जेट गल्फस्ट्रिम जि२०० रहेको छ ।
उनी कारका निकै सौखिन व्यक्ति हुन् । उनीसँग १९ वटा कारहरु रहेका छन् । जसमध्येका महंगा कारहरु यस्ता छन्, लाम्बोर्गिनी एभेनटाडोर एल्पी ७००–४ः ३,२०,००० अमेरिकी डलर, फेरारी ५९९ जिटिओ–३,८५,००० अमेरिकी डलर, बुगाटी भेरोन–१.७ मिलियन डलर, बेन्टले जिटी स्पोर्ट–३,२०,००० अमेरिकी डलर ।
लगानी, बिजनेश, समाजसेवा : द पेस्टाना सिआरसेभेन होटल–४० मिलियन डलर (यो होटल चार स्थान माडियारा, लिसबोन, मड्रिड र न्युर्योक रहेको छ ) । उनको किनेको मुल्य–१३१.६४ मिलियन डलरमा किनेको मोनाकोमा होटल समेत रहेको छ । सिआरसेभेन फ्यासन ब्राण्ड–यसले विश्वभर सिआरसेभेन फ्यासन ब्राण्डका कपडाहरु बेच्ने काम गर्छ । उनले विभिन्न संघसंस्थाहरुलाई मार्फत गरिब पिडित मानिसहरुलाई दान दिदै आइरहेका छन् । यति मात्र होईनत उनले सन् २०११ मा आफ्नो गोल्डेन बुट बेच्दै गाँजाका विद्यार्थीहरुका लागि १.६ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता गरेका थिए ।
खानपिन : चार सन्तानका पिता उनीको यो सफलताको पछाडि उनको संघर्ष, निरन्तर मेहनत, दृढता र आत्मविश्वास पनि जोडिएको छ । आफ्नो खेल जीवनलाई सधैं लयमा राख्नका लागि उनले अनुशासित दिनचर्या पालना गर्ने गरेका छन् । उठ्ने, सुत्ने, खाने, बस्ने, व्यायाम गर्ने कुरालाई उनले व्यवस्थित गरेका छन् ।
रियल म्याडि्रडमा खेल्न थालेदेखि नै उनले एक निजी डाइटिसियन राखेका छन् । उनी थोरैथोरै तर धेरै पटक खानेकुरा खान्छन् । दिनभरमा उनले करिब ६ पटक खानेकुरा खान्छन् । उनको खुराकमा माछा अटूट रहन्छ । उनी विभिन्न प्रकारका माछाको परिकार रुचाउँछन् । यतिसम्म कि उनको मनपर्ने परिकार पोर्चुगली काँडायुक्त माछाबाट बन्छ । त्यसमा प्याज, काटेको आलु, केही अण्डा र ओलिभ आयल हुन्छ ।
चिनीको सेवन गर्दैनन्, मदिरापान गर्दैनन् । खासमा उनका पितामा मदिराको लत थियो । अत्यधिक मदिराकै कारण उनको पिताको निधन भयो । त्यसैले उनले मदिरालाई घृणा गरेका छन् । चिनीबाट बनेका खानेकुरा पनि उनलाई रुचिकर लाग्दैन । आफ्नो खुराकमा प्रोटिनयुक्त डाइट लिन रुचाउँछन् । प्रोटिन डाइटका साथसाथै कार्बोहाइड्रेटयुक्त अन्न खान्छन् ।
रोनाल्डोलाई कुखुराको मासु पनि औधि मन पर्छ । उनले यसलाई ‘म्याजिक फुड’ भन्ने गरेका छन् । उनी ओलिभ अर्थात् जैतुन पनि सेवन गर्न रुचाउँछन्, जसबाट राम्रो फ्याट मिल्छ । लन्च जस्तै डिनरलाई पनि उनले दुई भागमा विभाजन गरेका छन् । साँझ उनी नास्ता लिन्छन्, जसमा ताजा फल र एभोकाडोको टोस्ट हुन्छ । रातिको खानामा ताजा माछाको परिकार हुन्छन ।
Previous मुग्लिनको जाममा यस्तो भएपछी ! हेर्नुस् |
Next BREAKING NEWS:सप्तकोशीमा पानीको बहाव बढ्यो, २४ वटा ढोका खोलिए